PC ပေါ်မှာအခမဲ့ ZIPEG DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Photoshop ကိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောခင်မှာမကြာခဏမေးခွန်းပေါ်ပေါက်: ဘယ်လိုစာသား (font ကို) ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကကမ်းလှမ်း 72 pixels ကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်ပါသနည်း အဘယ်အရာကိုလိုအပ်တဲ့ဖောင်လျှင်, ဥပမာ, 200 သို့မဟုတ် 500?
သင့်လျော်တဲ့ tool ကိုသုံးပြီးစကေးစာသားနဲ့ပင် (ဟုတ်ကဲ့, ကဖြစ်ပျက်) ကိုစံ 72 ppi ထက်ပိုမိုမြင့်မားစာရွက်စာတမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တိုးမြှင့်ဖို့: အတွေ့အကြုံ fotoshoper အမျိုးမျိုးသော contrivances နှုနျးမှစတင်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့, Photoshop ကိုသငျသညျ 1296 အချက်များဖို့စာလုံးအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြု, ဤများအတွက် standard feature အလည်းမရှိ။ တကယ်တော့ဒါဟာအင်္ဂါရပ်, ဒါပေမယ့်ဖောင့် setting များကိုတစ်ပြင်လုံးကို palette မဟုတ်ပါဘူး။ မီနူးကနေကိုခေါ် "Window" ခေါ် "သင်္ကေတ".
ဒီ panel ကိုအတွက်စာလုံးအရွယ်အစားညှိနှိုင်းမှုလည်းမရှိ။
နံပါတ်များနှင့်အတူလယ်ပြင်ပေါ်တွင် cursor ထားလိုချင်သောတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်။
တရားမျှတမှုအတွက်ကြောင့်ဒီတန်ဖိုးကိုအထက်မြင့်တက်မည်မဟုတ်, ထိုဖောင်နေဆဲရှိသည်လိမ့်မယ်စကေးကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ သာကွဲပြားခြားနားသောကျောက်စာမှာအတူတူပင်အရွယ်အစား၏သင်္ကေတများလက်ခံရရှိရန်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
စာသား layer ကိုခုနှစ်တွင် 1. သော့ချက်ပေါင်းစပ်နှိပ် CTRL + T ကို နှင့် setting များကို panel ကိုထိပ်မှအာရုံစိုက်။ အဲဒီမှာကွက်လပ်နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်: အကျယ် နှင့် အမြင့်.
2. ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အလိုရှိသောတန်ဖိုးကို၏ပထမဦးဆုံးလယ်ကွက်အောင်နှင့်ကွင်းဆက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒုတိယလယ်ကိုအတူတူကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အတိအကျနှစ်ကြိမ် font ကိုတိုးမြှင့်ပါပြီ။
ယခုတွင်သင်သည်စာသားကိုကျယ်စေနဲ့ Photoshop ၌ကြီးသောတံဆိပ်များကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံကိုငါသိ၏။
ဗီဒီယို Watch: Best Mac Apps : July 2018 part 1 (နိုဝင်ဘာလ 2019).